Sawirro: Swan oo gaaray Baydhabo xilli Lafat-gareen uu doorasho qorsheynayo - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Swan oo gaaray Baydhabo xilli Lafat-gareen uu doorasho qorsheynayo
Sawirro: Swan oo gaaray Baydhabo xilli Lafat-gareen uu doorasho qorsheynayo
Baydhabo (Caasimada Online) – Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan & wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo si weyn loogu soo dhoweeyey.
James Swan iyo wafdigiisa oo ay qeyb ka yihiin madax ka socotay hay’adaha kala ah IOM iyo OCHA ayaa kulan Albaabada u xiran yihiin waxa ay la yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen).
Wararka ayaa sheegaya in labada dhinac ay ka wada-hadleen xaaladda adag ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2021-ka.
Sidoo kale labada dhinac ayaa isla soo hadal qaaday arrimo ay ka mid yihiin gargaarka iyo saamaynta ka dhalatatay Ayaxa.
Safarka ergeyga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaya, iyada oo weli halkiisii yahay is mari-waaga doorashada ee u dhexeeya dowladda & mucaaradka
Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah maamullada taabacsan dowladda dhexe, iyada oo la filayo inay billowdo doorashada, gaar ahaan tan Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya.
Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid aad u cakiran, waxaana arrimahan ay ku soo beegmayaan, xilli ay dowladdu ku dhowaaqday hirgelinta doorashooyinka dalka.